Xawilaadaha Soomalida Kenya oo dib loo furay - BBC Somali
Xawilaadaha Soomalida Kenya oo dib loo furay
Image caption Lacagaha la kala xawisho waxay lafdhabar u ahayd dhaqaalaha soomalida
Bangiga dhexe ee dalka Kenya ayaa dib u fasaxay shirikadaha xawilaadaha ee dalka Kenya. waxaana warkan BBC-da u xaqiijiyay Cabdikariim Sabriye oo xawilaadaha soomalida u hadlay. dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalkan Kenya uu ku amray bangiga dhexe ee dalka Kenya in uu dib u eego nidaamka xawilaadaha Kenya.
Shirikadaha Xawilaadaha Kenya ayaa waxaa la xiray bishii labaad ee sanadkan ka dib markii ay kenya ka dhaceen weeraro is xigxiga. waxaana jiray in laamaha amaanka ee dalka Kenya ay sheegeen in la baarayo qaabka ay u shaqeeyaan xawilaadaha Kenya ka howlgala.
Xiritaanka xawilaadaha ayaa waxaa ka dhashay saamayn balaaran oo dhaqaale. iyadoo sidoo kalena uu dhaawac soo gaaray dhaqaale badan oo la kala xawilan jiray.